မြရေကန် | မမွငျရသောခရီးစဉ်ထိုင်း
မြကန်. အလှတရား၏မူလအစကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကျန်ရှိနေသေးသောမမြင်ရသောနေရာတစ်ခု, Khao Pra-Bang Khram တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောတွင်တည်ရှိသည်. ၎င်းသည်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲအချမ်းသာဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, မတူကွဲပြားသောသစ်တောအမျိုးအစားများနှင့်အတူ, အထူးသဖြင့်အပူပိုင်းမိုးသစ်တောနှင့်ချိုသောသစ်တောထူထပ်သောသစ်တောကြီး. ဒီထူးခြားတဲ့သစ်တော၌တည်၏, အဆိုပါ Gruney ရဲ့ Pitta, တစ်ချိန်က extince ဖြစ်ထင်ခဲ့တယ်, ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်.
အလည်အပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် : တစ်နှစ်ပတ်လုံး
ထိုနေ့၏အကောင်းဆုံးကာလ : မနက်ခင်း, 6.00 သို့ 9.00 နာရီ. နေ့လည်ခင်း, 15.00 သို့ 17.00 နာရီ.
အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့ : Krabi မှ, ခလွမ် Thom ခရိုင်အထိအဝေးပြေးလမ်းအမှတ် ၄ ကိုအသုံးပြုပါ, ဘယ်ဘက်သို့အဝေးပြေးလမ်းအမှတ် ၄၄၀၃၈ သို့စီး ၀ င်သောစီးတီးရေတံခွန်သို့လမ်းကြောင်းတည့်ခြင်းမပြုမီအဝေးပြေးလမ်းအမှတ် ၄၀၂၁ သို့လှည့်ပါ။, ဒါပေမယ့် Sa Morakot ဆီကို ဦး တည်တဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းပါ, လုံးဝ 50 အကွာအဝေးကီလိုမီတာ.